Al Shabaab oo ka hadashay qaabkii loo fuliyay qarixii Xarunta Gobolka - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Al Shabaab oo ka hadashay qaabkii loo fuliyay qarixii Xarunta Gobolka
Ururka argagaxisada Al-shabaab oo horay u sheegtay inay mas’uul ka yihiin qaraxii lagu weeraray xarunta gobolka Banaadir ayaa ka hadlay qaabkii ay filiyeen weerarkaas.
Warbuxin ay Al-Shabaab ku soo qortay baraha bulshada ee ku hadka magacooda ayaa lagu sheegay in qaraxaas ay doonayeen inay ku dilayaan ergayga QM ee Somalia, James Swan, balse uu ka badbaaday, kaddib markii qaraxa ay lasoo gudboonaatay cillad sababtay inuu qarxi waayo.
Kooxda ayaa isla maalintaas Weerar madaafic ah ku qaaday qaybo ka mida muqadishu oo ay ju jirto madaxtooyada iyada oo ku qarinaysa falkii ay ka damacsanaayeen xarunta Gobolka
Al shabaab ayaa sheegtay in qaraxa uu goor-dambe oo maalintaas ah qarxay, ayna dhibaato kasoo gaartay xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo uu ku jiro guddoomiyaha gobolka Banaadir, C/raxmaan Cumar Cismaan [Inj. Yariisow] oo dhaawiciisa loo qaaday dalka Qatar.
Dhanka kale, Hay’adaha amniga dowladda Soomaaliya – ayaan weli waxr ah kasoo saarin qaraxaas iyo sidii uu u dhacay, waxaase socda baaritaanno lagu sameynayo cidda gacan ka geysatay iyo qaabka xarunta maamulka loo geliyay walxahaan qaraxa.